Kuratidza zvinyorwa neelebheri Vaclav Vrbata
Bohumil Hanč (Mbudzi 19, 1886 muBenecko - Kurume 24, 1913 Labská bouda muMakomo eGiant) aive mutambi weCzech, skier uye wekuyambuka-nyika skier. Akafa zvinosiririsa panguva yemakwikwi epasi rose achifamba-famba achifamba-famba kwemakiromita makumi mana kumakomo eGiant Mountain pamwe neshamwari yake Václav Vrbata paIsita muna 50, apo mamiriro ekunze akangoerekana aipa.
1907-1913 PaFebruary 24, 1907, akakunda zita rake rekutanga kubva kuCzech Crown Cross-Nyika Championship mumakumi mashanu emakiromita. Raingova gore rechipiri remakwikwi emakwikwi. Wechipiri waive Emerich Rath uye wechitatu Josef Mejvald. Kubva ipapo zvichienda mberi, aigona kunakidzwa nemusoro weMaster Skier. Hanč akakunda zita remakwikwi mumakore akatevera 50 na1908. Ipapo aifanira kuenda kuhondo - akashanda semubati muSarajevo, muuto rehumambo. Mumwe waaigara naye Václav Vrbata, waakanga aziva naye kubvira Sokol, akashandawo naye, uye panguva yehondo yake vakava shamwari dzepedyo. Mushure mehondo, akaroora uye iye nemukadzi wake Slávka vaitarisira mwanakomana, Bohumil.
Mujaho wekutiza Musi waKurume 24, 1913, gore rechisere remakumi mashanu emakiromita mamishinari yakaitika…